Hans Epp dia tena manimba ny olona izay miaina tsy afa-po amin’ny fiainana. Miezaka hahita izay midika hoe amin’ny maha-mpivarotra voankazo, fa ny aretim-po misakana ny fahaiza-miasa, izay mivadika ny tsy fahafaham-po ao amin’ny famoizam-po. Frau Kusters dia ny fanomanana ny sakafo hariva tara iray toa olon-tsotra tolakandro ao ny olon-tsotra toa an-dakozia tany Francfort, Allemagne. Ramatoa Kusters te-hanampy am-bifotsy sausages ny hanina, azy. Jereo full famintinana Ny alemana Tandrefana mbola tanora miasa-kilasy ny olona mandresy ny loteria sy ny manomboka ny fifandraisana amin’ny olona mihoatra noho ny mijoro ara-tsosialy. Tamin’ny taonjato fahasivy ambin’ny folo, dia fito ambin’ny folo taona Effie Brest dia nanambady ny zokiny Baron von Amin’ny fanjakana sy ny hetsika an-trano, fa mino izy fa manana ny fanahy masina, amin’ny kely mitoka-monina Baltika tanàna. Jereo ny famintinana feno Walter, alemana anarchist poeta, dia fohy ny vola araka ny mpitory mandà tsy hanome azy mialoha. Miezaka isan-karazany ny fomba fitaizana ny vola, anisan’izany ny fitifirana iray ny mistresses sy. Jereo ny famintinana feno ao taorian’ny ady tany Alemana Andrefana, ny mahafatifaty Von Bohm no voatendry ho ao an-tanàna Trano vaovao Kaomisera. Ny fitsipi-pitondrantena dia notsapaina izy raha tsy nahy no mianjera ao amin’ny fitiavana iray mpivaro-tena ny mpiasa, Lola, ny karama tompovavy mpanao kolikoly ny fananana developer. Margot, izay mipetraka any amin’ny aina afovoany-kilasy-trano, ny tahotra fa izy dia very ny sainy rehefa nanana ny zaza faharoa. Ny vadiny Kurt, izay no atao ny fianarana ho an’ny fanadinana, tsy. Jereo ny famintinana feno Alemaina any ny tany am-boalohany s. Manohitra tontolo resahana ny Nazia’ mitsangàna, Hermann, rosiana émigré sy sokola magnate, mandeha tsikelikely ny adala. Izany dia manomboka amin ny seza tenany amin’ny seza. Jereo ny famintinana feno mikasika ny sarimihetsika napetraka misy zavatra roa tsy hita, ny horonan-tsary ara-nofo sy ny tale. Noho izany, ny mpilalao sarimihetsika sy mpiantsehatra ary koa ny mpiasa miezaka manao ny tsara indrindra avy amin’ny toe-draharaha.
Jereo ny famintinana feno Iray nanan-karena ny mpivady, miaraka amin’ny zanany vavy Angela, zatovo izay mandeha amin’ny tehina, milaza tsirairay izy ireo, eny nandritra ny faran’ny herinandro amin’ny raharaham-barotra (izy ho any Oslo, dia mba Milan). Raha ny marina, na dia mihaona ny tia, ary ny roa any ny fianakaviana ny faritra an-trano, Truants lapa. Mahagaga samy hafa, misy ny be pitsiny fihomehezana izy ireo no manapa-kevitra ny hanohy toy nomanina. Sakafo hariva, na izany aza, dia tsy tapaka ny fahatongavan’ireo Angela sy ny moana mpanompo, koa atao hoe Truants. Ny andro manaraka, ny zaza no hanombohany ny lalao ‘Shinoa roulette,’ izay ny ekipa iray miezaka ny mamantatra izay ny azy ireo ny ekipa hafa no mieritreritra ny amin’ny alalan’ny fametrahana fanontaniana. Ny lalao dia ny lelan ny habibiana sy ny vokatra dia mipoaka.
Ny ambony-kilasy roa nisara-ny faran’ny herinandro, ny tsirairay dia samy manana nilaza lainga hafa momba ny toerana halehany, na izany aza dia samy hiafara amin’ny toerana mitovy ihany amin’ny tia fahamaiton’ny taretra rongony, ny schloss any ambanivohitra. Izany no tsara machinated ny tanora sembana vavy, izay efa fantatra ny raharahan ny ray aman-dreniny nandritra ny taona maro. Ny zava-niseho izay Herr Kristy sy ny tia mandeha any amin’ny Madame Kristy sy ny tia dia tsara tarehy, misy voalohany taitra, dia izy ireo no hitantana ny dissociate avy ny anjara asany, ary manana tsara chuckle momba izany miara.
Dia toy izany, dia manomboka ny faran’ny herinandro
Ny zanany vavy tonga sy misisika amin’ny lalao Shinoa Roulette, izany no mahaliana kely lalao. Mahazo ekipa roa ny olona efatra; ny ekipa voalohany mitondra olona iray avy amin’ny hafa ao amin’ny zava-miafina conclave. Ny faharoa dia ny ekipa avy eo dia ny maminavina izay ny olona ny ekipa izay dia efa voafidy amin’ny alalan’ny fametrahana fanontaniana sivy, ny ny endrika, raha toa ka io olona io no gazety-boky, izay gazety izy ireo. Na izany aza, ny lalao mahazo tsara tarehy lozabe raha te-hilalao azy izany, izay mety ho ny tena mety fomba ny faty ho an’ny olona ao amin’ny fanontaniana ohatra. Afaka mahita titillation teo ny lalao amin’ny alalan’ny fiderana ny olona iray raha tsy misy azy ireo ny fahafantarana izay ianao no manondro na maizina fifaliana ao amin’ny lalina fanompana azy ireo. Ny zanany vavy dia nanao izany rehetra izany mba kosohy ny olon-dehibe teo. Mihevitra aho fa raha misy ny hafatra dia ny sarimihetsika ny s fa raha karazan-adders tsy tokony t gaga raha hitombo sy hihinana ianao. Ny mpivady dia manana mazava fa tsy omena noho ny vavy (hafa noho ny ara-nofo ny fitenenan — izy na inona na inona tiany, sôkôlà saribakoly, akanjo tsara tarehy f). Ny lalao dia ny fanatanjahan-tena ao ny habibiana, ny mpivady ny valiny ho tsara tarehy. Na izany aza, misy be dia be ny tsy fandriampahalemana, ny olona rehetra dia manontany tena raha toa ka ny olona izay dia faritana ho toy ny apple amin’ny kankana ao anatiny dia azy ireo, ankoatra izany ilay olona namaly ny fanontaniana matetika sahy manavakavaka sy ny tsy fahatakarana ny olona izy ireo dia niresaka momba ny. Misy ny sasany somary hafahafa ny zavatra mitranga, ny mpitondra kapoaka-karazana Gabriel manoratra unsound doggerel sy mamaky mafy izany ny mpivady (teo aloha ihany ny iray amin’ny mpivady, amin’ny fotoana). Misy andinin-tsoratra masina ny toetra amam-panahy isika tsy mahita, hafahafa complicities, tsy voazava ny fifandraisana. Zavatra iray ianao dia afaka milaza na dia ny sarimihetsika dia nitifitra brilliantly, misy ny sasany mahafinaritra boribory ny tifitra (famantarana ny Scorsese sy Fassbinder tsy tapaka ny mpiara-miasa Michael Balaua) toerana ny fakan-tsary mihodidina ny endri-tsoratra, maro ny tifitra ny olona hita taratra eny fitaratra na hanapaka ao roa amin’ny tataom-baravarana, mahafinaritra maromaron’ity vitsy. Angamba ilay faran izay tsara indrindra sarimihetsika aho ve ny hita amin’ny sary teny.
Ny isa loatra no tena avo ny hamafin’ny
Izaho dia mandray azy tsara tarehy toy ny horonan-tsary mifono zava-miafina, iray amin’ireo sehatra lehibe dia ny zanany vavy nipetraka tao an-pandriana miresaka Gabriel, ny fakan-tsary dia amin’ny haavon’ny tany fotsiny ambadiky ny laharana ao amin’ny saribakoly izay izy no nandamina toy ny karazana fanehoam-pitiavana ho an’ireo mpanatrika ho an’ny azy. Ianao mahatsiaro ho toy ny iray amin’ireo saribakoly tena, ny s tena hafahafa. Azo antoka fa, Fassbinder dia manohitra ny fitenenan-dratsy ny sasany, olona antonontonony amny’ny mpia fomba eto. Ny endri-tsoratra no mitoka-monina noho ny fihetseham-po-tena mendrika, ny fitaka, ny niharam-boina ny sata, sy ny maranitra fiteny tsy fantatra, tsy misy fitiavana na aiza na aiza. Isaky ny fifandraisana ao amin’ny sarimihetsika nahatsapa toy ny hoe izany no iray manana ny hafa, toy ny saribakoly kely. Ny s nastiness rehetra manodidina, dia saika ny fanatanjahan-tena ao misanthropy, iray mpamakafaka nanondro izany ho toy ny fanatanjahan-tena ao amin ny fitaka ho velona tetika. Vao haingana aho no mitondra ny lohateny hoe ny famerenana ny ahy, Ny boky momba ny fomba ny velona, koa tena izany dia Ny boky momba ny hoe ahoana no tsy mba ho velona. Ny s toy ny manambany ny niharam-boina ny victimizers. Iray amin’ireo Fassbinder s sarimihetsika hafa dia antsoina hoe Satana s manao Labiera sy ny tena mieritreritra aho fa ity iray ity dia mety efa nisy ihany koa. Mahita showtimes, jereo trailers, mijery sary, manara-maso ny Wikipedia sy ny tahan’ny ny toerana tena ny filma sy TELE eo an-telefaonina na ny tablette
Guangzhou, Shina ny Toerana Iray ny Ankizivavy Iray Mans Travel →